ICórdoba - Thola izindawo zayo ezinhle kakhulu nezifanekisela | Ukuhamba kwe-Absolut
ICórdoba yidolobha nesifundazwe sase-Andalusia eSpain. Kusemaphethelweni eSierra Morena futhi sekuyidolobha lesithathu elinabantu abaningi e-Andalusia. Yasungulwa ngekhulu lesi-XNUMX BC futhi inamakhona amaningi afingqa wonke umlando wayo. Esinye sezihambeli zokuqala ezingaphezu kwesibopho siseMosque-Cathedral yaso. Lapho izitayela ezahlukahlukene ezinjengeMudejar, Gothic noma Renaissance zihlangana.
Ukuhamba okulandelayo esizokuyisa endaweni yemivubukulo yaseMedina Azahara, ebangeni elingamakhilomitha ayi-8 ukusuka edolobheni. I-Alcázar de los Reyes Católicos iyinqaba yobuhle obukhulu, njengendawo yezingadi. Uma ufuna isithombe esihle, ungakhohlwa ukuthatha uhambo ngebhuloho laso laseRoma.
Ngokufanayo, enye yezindawo ezikhetheke kakhulu yiLa Plaza de la Corredera. Iningi lamabha nezindawo zokudlela ligxile lapho. Vele, uma sisho izikwele, isikwele seCapuchin asikude kakhulu noKristu weLanterns. Uma ufuna ukujabulela okuzungezile kwemigwaqo emincane, kuzofanela uvakashele ikota yamaJuda futhi kuyo, iCalleja de las Flores. Isinyathelo odongeni, iTorre de Calahorra noma iPalacio de Viana ngamanye amaphuzu abalulekile eCórdoba.
Uhambo lusiza njalo ukufaka umoya-mpilo kunoma iyiphi inqubo. Ukunqamula futhi uthole izindawo ezintsha ngenxa yokuthola kalula ...
Uma kukhona ubuhle obulodwa obuchaza iSpain, ukuhlukahluka nokuphambana kwezilungiselelo zayo. Singashushuluza e ...
Amahhotela eCordoba alungiselela usuku olwandulela unyaka omusha
Por I-Absolut Cordoba kwenza iminyaka 4 .
Amahhotela aphezulu enhlokodolobha yaseCordovan alungiselela umgubho wangoNyaka Omusha ngochungechunge lwe ...